Sida loo badbaadi Notes ka iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS in Computer ah
> Resource > iPhone > Sida loo badbaadi Notes ka iPhone in Computer ah
Waxaa laga yaabaa inaad samaysay ka hor, si deg deg ah inuu arinkaa aad iPhone ka dib markii jawaabay wicitaan oo taleefan ah ka qof, marka aad jidka meel, ama qor magaca makhaayad marka aad baar online si aad u hesho meel lagu taariikhda hore. Samaynta qoraalada ku saabsan iPhone, waxaa dhacaya maalin kasta iyo meel kasta, sababta keliya oo ka mid ah nolasha waxaa Nooga keeno. Mararka qaarkood, annaguna waannu samayn for our nolosha, sida liiska ah, dhalashadiisa hooyadiis, iwm .; mararka qaarkood, annaguna waannu samayn for our shaqo, sida ugu dambayn, shir, iwm Si kastaba ha ahaatee, ka sokow akhrinta qoraalo kuwa iPhone, waxaan badbaadin karo iyo maareeyo kombiyuuterada our?
Jawaabtu waa HAA. Lacag qoraalada iPhone in PC ama Mac ah, waxaad u baahan tahay qalab munaasib ah, kaas oo kaa caawin kara inaad ka iPhone dhoofin qoraalada si aad u computer. My talo waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) . Labada versions of this Wondershare Dr.Fone ee macruufka ogolaado in aad si toos ah baarista iPhone in aad eegto qoraalka ku yaal, oo iyaga muujiyaan in aad ku eegaan. Markaas eegista waxaad dooran kartaa iyo in ay computer ka badbaadin qoraalada iPhone aad ka mid ah. Waa maxay dheeraad ah, waxaad u isticmaali kartaa si aad u hesho qoraalada tirtiray aad iPhone. Qoraalada ka sokow, waxa ay taageertaa fariimaha, xiriirada, sawiro, videos, abuse yeedha, oo sidaas.
Sida loo badbaadiyo qoraalo ka iPhone si aad u computer
Waxba ma waxaad isticmaali version Windows ee Wondershare Dr.Fone ama version Mac ah, waxaad badbaadin kartaa qoraalo ka iPhone si la mid ah. Next, aynu qaadan version Windows sida isku day ah oo wada.
Ka dib markii ay soo degsado barnaamijka, rakibi iyo waxa maamula on your computer. Suuqa ayaa aasaasiga ah waxaa ka mid ah ayaa muujinaya sida soo socota. Ka hor inta xira iPhone, hubi in aad leedahay Lugood dambeeyay lagu rakibay on your computer, laakiin ma ay u maamulaan. Markaas xiriiriyaan iPhone via cable USB ah.
Wixii iPhone 4 iyo iPhone 3GS, waxaad bedelan kartaa in hab sare. Haddii aad sidaas samayso, waxaad arki doonaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Sawirka aad iPhone qoraalka
Wixii iPhone 5 iyo iPhone 4 isticmaala, waxaad riixi kartaa Start Scan on suuqa kala barnaamijka si toos ah baarista iPhone.
Wixii iPhone 4 iyo iPhone 3GS useres, waxaad u baahan tahay in ay marka hore soo galaan hab iskaanka qalab ee. Raac habka hoos ku qoran:
1. Ku qabo qalab aad, oo guji Start ee suuqa kala.
3. Fur button Power markii 10 seconds maray, laakiin sii haysta button Home for kale 15 ilbiriqsi.
Marka aad u sheegay in aad ku soo gashay hab iskaanka ah, barnaamijka si toos ah iskaan doonaa iPhone si aad u hesho macluumaadka ku yaal.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo badbaadin iPhone qoraal computer
Scan ka dib, waxaad arki doonaa natiijada ka scan soo socda. Dhammaan xogta laga helay aad iPhone waxaa si toos ah lagu tilmaamay inay qaybo kala duwan, sida kitaabkii duudduubnaa camera, il sawir, xiriirada, fariimaha, iwm Riix category ee Notes. Waxaad mid ka mid ah ku eegaan karo oo dhan ka kooban oo faahfaahsan. Iyaga Hubi oo aad doorato waxa aad rabto. Markaas riix Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Barnaamijku wuxuu soo kaban karto xogta tirtiray ka iPhone. Sidaa awgeed, qoraalada halkan helay waxaa ka mid ah kuwa dhawaan la tirtiray iyo in hadda jira ee ku saabsan iPhone. Waxaad isticmaali kartaa badhanka ugu sareysa si ay u kala soocaan: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya.
Sida loo badbaadi SMS ka iPhone si Mac ama PC
Waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato VLC u iPhone
Ma AirDrop Share Wax walba u dhexeeya iDevices kasta?
Sida loo Undelete iPhone Data (oo ay ku jiraan iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS)